Life izimo zihlukile - emnandi futhi akunjalo. Abaningi babo enifana wukuthi bawadinga ngokuphuthumayo imali: isipho noma ukusebenza ukuthenga lutho izimo ezikahle kakhulu noma umonakalo wahlupheka ingozi ezenzeka uwena obangele ukuba akuthinte. Yiqiniso, ungakwazi ngaso sonke isikhathi ukuya ebhange, ngemva eqoqwe amaphepha adingekayo. Kodwa yini okufanele uyenze uma ukulandisa kuqhubeka umzuzu isikhathi noma umlando credit baye lonakaliswe (futhi lokhu kuyinto eqakathekileko ngoba amabhange)? Isiza isikhungo credit, ukubolekisa kuvikelwe impahla eyigugu - a pawnshop. Indlela uyazazisa izinto ezikhungweni ezinjalo futhi ngalokho enye odinga ukukwazi ezicashile ezingaba umboleki? Sizobe sixoxe ngalokhu kamuva.
Kungakhathaliseki ukuthi kubalulekile ukusebenzisa kuya pawn?
Esikhathini esiningi abantu ubheke pawnshops nganhlanye. Kodwa lokhu limane nje ngemibono. Indlela pawnshops ukuhlola izinto futhi ngokushesha kangakanani ingenzele ukubolekisa, izakhamuzi eziningi Russian ukuhlola ukuthuthukiswa kokuntengantenga kwezimali, okuyinto buye baphoqa abaningi ukuba ufune imali "fast". Ungesabi ukuthi isikhalazo ku-pawnshop, wena lokudlela up idumela lakho noma ube yisisulu. Khetha inhlangano okunokwethenjelwa nge isipiliyoni somsebenzi okuqinile, ningaqiniseka ukuthi:
ukucutshungulwa okusheshayo isicelo (ngokwesilinganiso imizuzu 10);
ukuthola izimali uma unayo i-passport, futhi kuphela yetintfo letibalulekile;
lokhu kwakuyoba nomphumela omuhle ngisho ne "usula 'emlandweni credit (i pawnshops akunandaba ezimweni eziningi);
ubuqotho nokuvikeleka eseduze yakho ukuze isikhathi ngesikweletu;
ithuba ngaphandle kwezinkinga ukuthola impahla yabo emuva, ngaphansi kwemibandela kuthengiselana;
Ngakho, uma Kuyaphuthuma imali, bese ulinda ukwamukelwa imalimboleko ebhange isikhathi eside kakhulu, noma akunakwenzeka ngokomthetho ngoba ngenxa yezizathu eziningana, isikhalazo ku-pawnshop - kuyinto ngendlela ehloniphekile aphume isimo.
Njengoba pawnshop ihlola impahla?
Ngo isikhungo ngasinye ezifana uhlu ayo intengo, kanye nenqubo yawo. Kuhlola izinto pawnshop eyenziwa ikhumbula:
value abo emakethe;
khona / ukungabikho isiqinisekiso;
imodi ukusetshenziswa kwempahla ngoba isikhathi loan.
Ngokwesibonelo, ngo-pawn esitolo inhlokodolobha sika Zalogator (zalogator.ru) bangathola kuze kufinyelele 95% yezindleko izimoto nje isigamu sehora. Yiqiniso, ngeke ukwazi ukusebenzisa imoto - ke izohanjiswa kupakwa inhlangano. Njengoba pawnshop ihlola impahla (kuleli cala - izimoto), nabo ungeyena Uzimisele ukunikela? Kufika 40-50% yenani emakethe wemoto uzothola ezandleni zakho, uma ushiya isibambiso ipasipoti lobuchwepheshe kuphela. Futhi kulokhu, ukwandisa isikhathi isicelo, umlando ikhredithi kucatshangelwe, esikhundleni ukubhalisa izimoto, njll Ngalé baqinisa ngenxa yokuthi pawn livele ingozi ngaphezulu, ikunike loan ngenkathi ushiya imoto unayo.
Yiziphi ezinye izinto ongabeka endaweni pawnshop?
yemizi nezwe iziza.
Jewelry - elilinganiswe isisindo isampula kanye nangohlobo lwezinto namatshe ayigugu akufakwanga.
Amahora ezibizayo - ngokwesibonelo, Casio, aseMpumalanga, Citizen, nabanye.
izingubo zangaphandle eyenziwe lesikhumba noboya - samukelwa kuphela zisesimweni esihle.
Household Izisethenziswa - zaba khona / ukungabikho isiqinisekiso, isithunzi sha, eseyintsha insimbi.
Kungakanani kuyodingeka overpay?
Ngakho manje uyazi ukuthi nenqubo ukuhlola pawnshops izinto. It uhlala ukuze sinqume ukuthi iphesenti ngokweqile. Ngokuvamile, pawn izitolo oyedwa isitoreji usuku eseduze kuthatha 0.5-1% semali-mboleko. Ngakho, esikhathini esidlule ngenyanga "ukuvuza" kuya 35%. Uma kungakapheli inyanga uzokhokhiswa inzalo njalo, kodwa ngeke bakwazi ukubuyela loan ngokwayo, pawnshop ongalinikeza deal, futhi izinga kungenzeka kancane encishisiwe. Kulabo abaye imisiwe ukukhokha inzalo, izinga kuba kabili. Uma ungakwazi ukukhokhela ngesikhathi ne pawnshop, impahla azothengiswa inhlangano ukumboza ngokulahlekelwa kwabo.
Ukuthenga EChina, i lezimpahla ezimele futhi ukuthekelisa
Indlela ukusindisa imali? Indlela ukusindisa imali usenkingeni
Bobabili ngokusebenzisa Internet ukubeka imali ocingweni? Izindlela zokukhokha
"Ngaphambi" - imvume. "Lada Priora" - ezibekiweko lobuchwepheshe, imvume. Vaz "Ngaphambi"
Ben Franklin. Umlando Omfushane sezombangazwe
Umuthi 'Isiliva Fox ": ukubuyekezwa, izincazelo kanye nokusungulwa
Uyazi ukuthi uMoscow uneminyaka engakanani?
Bosch MUM 54251 - umsizi ophelele ekhishini
Isiketi ezifincizekile ezifana nezimpiko phansi izici inhlanganisela umhlabeleli professional kanye nezincomo